Shiinaha 1050 Dhuumaha Aluminium ee warshadda baabuurta iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Dhuumaha aluminiumku waa nooc ka mid ah tuubooyinka birta ah ee aan birta ahayn, kaas oo ka samaysan aluminium saafi ah ama daawaha aluminium oo lagu sii daayay walxo tuubooyin bir ah oo bannaan oo dhererkeedu yahay dhererka.
Marka loo eego habka extrusion, waxa loo qaybiyaa tuubo aluminium ah oo aan fiicneyn iyo tuubo caadi ah
Sida saxda ah: tuubooyinka aluminiumka caadiga ah iyo tuubooyinka aluminiumka saxda ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin tuubooyinka aluminiumka saxda ah guud ahaan waxay u baahan yihiin in dib loo habeeyo ka dib marka la saaro, sida sawir qabow, sawir fiican iyo duubid.
Waxaa loo qaybiyaa dhumucdiisuna tahay: tuubo aluminium caadi ah iyo tuubo aluminium ah oo dhuuban
Waxqabadka: caabbinta daxalka, miisaanka fudud.
1) Fasalka: 1000, 3000, 5000, 6000, 8000 taxane
2) Heerarka: F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28
3) Daaweynta dusha sare: daahan budada ah, Midabka Anodizing, Ciid qarxinta, cadayashada, CMP
4)Nooca: wareegsan, labajibbaaran, leydi ama habaysan
5) Midabka:Nature, silver, bronze, champagne, madow, gloden, iwm.
6) Cabbirka: 1. Dhexroorka tuubada wareega: 9.5-250 mm (la habeeyey)
7) Dhumucda gidaarka:0.5-20 mm (la habeeyey)
8) Length: customized
9) Adeegga habaynta: feeray
Marka hore, faa'iidooyinka tignoolajiyada alxanka: tignoolajiyada alxanka ee tuubada naxaasta-aluminiumka ah ee khafiifka ah, taas oo ku habboon wax soo saarka warshadaha, waxaa loo yaqaanaa dhibaato heer caalami ah, waana tignoolajiyada muhiimka ah ee lagu beddelayo naxaasta aluminiumka si loogu xidho tuubada hawada. qaboojiyaha.
Marka labaad, faa'iidada nolosha adeegga: laga soo bilaabo aragtida gidaarka gudaha ee tuubada aluminiumka, sababtoo ah qaboojiyaha kuma jiraan biyo, gidaarka gudaha ee tuubada isku xidhka naxaasta-aluminiumku ma dumin doonto.
Seddexaad, faa'iidada tamarta-badbaadinta: hoos u dhigida waxtarka wareejinta kulaylka ee dhuumaha isku xidha ee u dhexeeya unugga gudaha iyo qaybta dibadda ee qaboojiyaha, badqabka tamarta badan ayaa ah, ama sida wanaagsan ee saamaynta kuleylka kulaylka, ayaa sii kordhinaysa tamar- badbaadin waa.
Afar, waxa ay leedahay wax qabad foorarsi oo heersare ah waana ay fududahay in la rakibo oo la guuro
Tuubooyinka aluminiumka ayaa si weyn looga isticmaalaa dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha, sida baabuurta, maraakiibta, hawada sare, duulista, qalabka korontada, beeraha, qalabka elektiroonigga ah, qoyska, iwm. Tuubooyinka aluminiumku waa meel kasta oo nolosheenna ah.